कसरी भाइरल प्रेरित दमा फ्लेयरबाट बच्न - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि बनाम मित्र खेलहरु चेकआउट समुदाय, कम्पनी प्रेस कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर घरपालुवा जनावर कम्पनी भारी खेल समाचार समुदाय कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के गर्ने जब रोगले तपाईंको दमालाई नराम्रो बनाउँछ
के गर्ने जब रोगले तपाईंको दमालाई नराम्रो बनाउँछ
धेरै जसो समय, तपाईको दमको लक्षणले तपाईलाई दु: ख दिनुहुन्न जबसम्म तपाई बिरामी पर्नुहुन्न। त्यसोभए, अर्को कुरा तपाईलाई थाहा छ, तपाई मध्य रात खान्दै हुनुहुन्छ र चुहुने ननस्टपमा। यसलाई भाइरल प्रेरित दम फ्लेयर भनिन्छ, र यो तब हुन्छ जब तपाईंको अवस्था श्वासप्रश्वासको रोगले बिग्रेको छ। भाग्यवस, त्यहाँ प्रभावकारी उपचारहरू छन्, तपाईको इनहेलर प्रयोग गरेर बाहिरी घण्टामा तपाईले सजिलै सास फेर्न पाउनुहुनेछ र रातीमा सुत्‍न पाउनुहुनेछ।
के भाइरसले दमलाई अझ खराब बनाउन सक्छ?
अध्ययन देखाउनुहोस् कि भाइरल संक्रमणले दमको लक्षणहरू खराब गर्न निम्त्याउँछ। दम आक्रमणको सबैभन्दा सामान्य ट्रिगरहरूमध्ये एक भाइरल वा ब्याक्टेरिया संक्रमण हो, जस्तो कि चिसो, फ्लू, निमोनिया, वा साइनस संक्रमण। जब तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईंको वायुमार्ग फुलेको र साँघुरो हुन्छ-जसो हावामा लिनको लागि यसलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। श्वासप्रश्वासको भाइरसले अक्सर बलगमको वृद्धि गराउँछ, जसले सास फेर्न पनि गाह्रो बनाउन सक्छ।
सास फेर्न गाह्रो हुनु COVID-19 को लक्षण हो, र दमसँग पीडित व्यक्तिहरूको लागि यो झनै नराम्रो हुन सक्छ। को अनुसार, दमा को लागी मानिस कोलानोभाइरस उपन्यास पक्राउ गरेमा गम्भीर बिरामी हुने जोखिम बढी हुन्छ रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC), समान कारणहरूको लागि अन्य श्वासप्रश्वासको रोगहरूले लक्षणहरू बढाउँदछ।
भाइरस प्रेरित दम फ्लेयरको लक्षण के हो?
दम फ्लेयर-अप ब्रोंकोस्पाज्म र फोक्सोको सूजन हो, डाक्टर परामर्शदाता पियरेट मिमी पोइन्सेट भन्छन्। आमा सबैभन्दा मनपर्दछ । भाइरस सहित श्वासप्रश्वासको संक्रमणले दम फ्लेअर्सलाई ट्रिगर गर्न सक्छ। भाइरल-प्रेरित दमा फ्लेयर-अपका लक्षणहरू नियमित दम लक्षणहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, र समावेश हुन सक्छ:
यो राम्रो संकेत हो कि यो भाइरलसँग सम्बन्धित छ यदि तपाईंको दमा सामान्यतया राम्रोसँग नियन्त्रणमा छ भने, र यी लक्षणहरू भाइरल बिरामीको साथ देखा पर्छन्।
दमको लक्षण हल्कादेखि गम्भीरसम्मको स्पेक्ट्रममा देखा पर्छ। दमको गम्भीर आक्रमण प्राणघातक हुन सक्छ, त्यसैले लक्षणहरू चिन्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईंले सास फेर्न कठिनाइ, नाकको फुलेको, कुरा गर्न वा हिड्दै गाह्रो हुने र / वा ओठ, छाला वा नाखूनमा नीलो टिन्ट जस्ता लक्षणहरू विकास गर्नुभयो भने9call ११ मा कल गर्नुहोस् र तुरुन्त चिकित्सकीय सहयोग लिनुहोस्।
कुन कुराले दमालाई खराब बनाउँछ? भाइरल रोगको अलावा, केहि अन्य सामान्य ट्रिगरहरू दम फ्लेयर-अप को हुन्:
धुवाँ जस्तो हावामा इरिटिएन्टहरू
Weather— चिसो तापक्रम वा एलर्जीको मौसम
बीटा-ब्लकरहरू जस्ता औषधीहरू
जब दम फ्लेर-अप हुन्छ, यसले तपाईंको ब्रोन्कियल ट्यूबहरू कम्प्रेस हुने छैन, केही दिन वा हप्ता लाग्न सक्छ, अवस्था कत्तिको गम्भीर हो निर्भर गर्दै।
जब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ दमलाई के सहयोग पुर्‍याउँछ?
विशेष गरी भाइरल-प्रेरित दम लक्षणहरूको लागि कुनै उपचारहरू छैनन्, तर त्यहाँ धेरै उपचारहरू छन् जसले खांसी, छातीमा जकडन र घरघरांती कम गर्दछ। दमको प्रबन्ध गर्ने उत्तम तरिका भनेको रोकथाम र दीर्घकालीन नियन्त्रण हो जुन आक्रमण हुन अघि उनीहरूलाई रोक्दछ।
सर्वप्रथम, तपाईं बिरामी हुनु अघि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग दमको एक्शन योजना बनाउनुहोस्। यो एकदम विशिष्ट कागजात हो जुन तपाइँको नम्बरहरूमा आधारित हुन्छ जब तपाइँ एक पीक फ्लो मीटर र लक्षणहरूमा सास लिनुहुन्छ। त्यहाँ तीन क्षेत्र छन्: हरियो, पहेंलो र रातो।
हरियो क्षेत्र त्यो स्तर हो जहाँ तपाईं लक्षणहरू हुनुहुन्न र तपाईंको शिखर प्रवाह यसको उच्चतममा छ (शिखर प्रवाहहरू व्यक्तिगत उत्तम शिखर प्रवाह निर्धारित गर्न दुईदेखि तीन हप्तामा मोनिटर गरिन्छ)। शिखर प्रवाहहरू तपाईंको हालको क्षेत्र अनुगमन गर्न दैनिक मापन गरिन्छ।
पहेंलो क्षेत्र घटेको चोटी प्रवाह र लक्षणहरूको सुरुवातका लागि उल्लेखनीय छ।
रातो क्षेत्र गम्भिर रूपमा घटेको चोटी प्रवाह र गम्भीर लक्षणहरूको लागि उल्लेखनीय छ।योएक आपतकालीन क्षेत्र हो जुन तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्न वा आपतकालिन हेरचाहको लागि जाने आवश्यकतालाई जनाउँछ।
प्रत्येक जोनसँग सम्बन्धित दवाईहरू हुनुपर्छ जुन तपाईंको दमालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सिफारिस गरिएको छ।प्राय: पहेंलो र रातो क्षेत्रमा हुनु गम्भीर दमको स is्केत हो, डा। पोइन्सेट भन्छन्।
दम औषधीका प्रकारहरू के छन् जुन तपाई बिरामी भएको बेलामा सहयोग पुर्‍याउँछ?
दमको औषधीलाई दुई प्रमुख वर्गमा विभाजन गरिएको छ: दीर्घकालीन नियन्त्रण औषधिहरू र द्रुत-राहत औषधीहरू, डा। पोइन्सेट भन्छन्।
दीर्घकालीन नियन्त्रण औषधिहरू ईन्फ्लेमेन्टरी, कन्ट्रोलर, वा मर्मत सम्भार औषधी पनि भनिन्छ। यी औषधीहरूले फोक्सो र बलगम उत्पादनमा सूजन कम गर्दछ। इष्टतम प्रभावको लागि दीर्घकालीन नियन्त्रण औषधीहरू नियमित रूपमा लिईन्छ symptoms लक्षणबिना पनि -। यसले ईन्हेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड्स, मौखिक औषधिहरू, र संयोजन इनहेलरहरू समावेश गर्न सक्दछ।
द्रुत-राहत औषधिहरू उद्धार औषधीका रूपमा पनि चिनिन्छन् र दमको गम्भिर लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ जब तपाईं पहेंलो वा रातो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ।
तपाईंको कार्य योजना जब बिरामी दुईको संयोजन हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई एक स्टेरॉइड इनहेलर प्रयोग गर्न शुरू गर्न सिफारिश गर्न सक्छ भाइरल बीमारी को पहिलो संकेतहरु को एक ज्वालाग्रस्त रोक्न को लागी।औषधिहरू मनपर्दछ अल्बुटेरोल मांसपेशी ऐंठन आराम र फेफो को गहिरा भागहरु मा राम्रो हावा प्रवेश गर्न नेतृत्व भन्छन्, भन्छन् सुमाना रेड्डी , MD कैलिफोर्नियाको Prunedale मा बबूल परिवार मेडिकल समूह मा MD।यस जस्तो छोटो अभिनय उद्धार इनहेलरहरूले मद्दत गर्न सक्दछ जब तपाईको दमाले काम गर्दछ जब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ - र तपाईले त्यसलाई सामान्य भन्दा धेरै पटक प्रयोग गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सिफारिस गर्न सक्छ नेबुलाइजर , जुन एक मास्कको माध्यमबाट औषधि दिइन्छ जुन तपाईंको फोक्सोमा औषधी लिन मद्दतको लागि हो जब तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ। तपाइँलाई जस्तै मौखिक स्टेरोइड पनि आवश्यक पर्दछ प्रेडनिसोन , तपाइँका लक्षणहरूको गम्भिरताको आधारमा।
सम्बन्धित: Albuterol साइड इफेक्ट
बिमा बिना गर्भनिरोधक चक्कीको मूल्य कति हुन्छ?
म कसरी रोक्न वा मेरो दमलाई बिग्रनबाट रोक्न सक्छु?
दमा कार्य योजना अनुसरण गर्नु दमलाई निगरानी गर्ने उत्तम तरिका हो, डा। पोइनेटसेट सल्लाह दिन्छन्।
थप रूपमा, तपाईले ट्रिगरहरू रोक्नको लागि कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ। यदि रोगले दमलाई भडकाउँछ भने, यसले समावेश गर्न सक्छ:
हात धुने प्राय:
मास्क लगाउने जब तपाईं बिरामी हुन सक्ने व्यक्तिहरूको नजिक हुनुहुन्छ
कम्तिमा sick फिट बिरामी मानिसबाट टाढा राख्दै
रोग प्रतिरोध गर्न प्रतिवर्ष फ्लू शट लिने
रोगको पहिलो संकेतमा थप उपचार उपायहरू सुरू गर्दै
तपाईले आफ्नो हेल्थकेयर प्रदायकसँग छलफल गर्नुपर्छ यदि तपाईको दमा बिरामी हुनु भन्दा बढि खराब हुँदैछ किनकि तपाईलाई आफ्नो औषधिमा समायोजनको आवश्यक्ता पर्न सक्छ। तपाईको औषधि नियमित रुपमा सेवन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तपाईलाई भडकाउनबाट बचाउनका लागि तोकिए अनुसार।
कति चाँडै सेक्स पछि तपाइँ योजना बी लिनु पर्छ
crestor र rosuvastatin बीच के फरक छ?
zoloft को एक कम खुराक को 50mg छ
गैर मधुमेह को लागी सामान्य रक्त शर्करा के हो
वॉलमार्ट मा बीमा बिना adderall कति छ